Somali | British Red Cross
Hel qooyskaagii aad weeyday
Waligaa qoyskaaga ma ku kala lunteen dagaalo, musiiboyinka dabicigaa, ama guuritaan? Soo hel sidan awoodi karno inaa kuu caawino.
See kuu caawin karnaa
Waxan dhici karta inaa ku cawin karno:
hel qoyskaaga la wayay: waan caawin karna marka qoysasku ku kala Dhumaan dagaalada hubaysan, musiiboyinka, iyo kala guur
gaarsiinta ogeysiska qoyska: Marka sida caadiga micnaheda tahay xirirka oo la waayo, wali waxan u diri karna waraaqo Laan Qayrta Cas (Red Cross) si ay u gaarsiso. (Ogow: ma dirino lacag ama baakado.)
hel shahaadada in lagu hayo: dadka soo booqday iskana qoray Gudiga Caalamiga ah ee Laan Qayrt Cas (GCLQ)inta lahayo ama xiranyihin, waxaan awoodi karaynaa inaa siino xaqiijinta oo ah xabsi qaabashada.
Adeegana ama caawinteena wa mid qarsoon oo ah bilash.
NA GALA SOO XARIIR
Ku dhufo batoon ka kor ku yaalo oo nasoo xariiri ay ku qorantahay. Bogga so socda waxaa ku qortaa magaaladaada iyo Boosta koodhaka ee bokiska markaas kudhufo seerji ama raadi.
Ka dib waxad wici kartaa ururkaaga gudaha ah ama ku dhufo botonka ku ay ku qorantahay 'Codsi' si loo dhamaystiro foomka onlaynka.
Xubin ka tirsan uruka baafinta baa ku la soo xiriiri doonta kuuna diyaarinaya balan.
Balanta waxan kaga cawinayna sida loo buuxiyo foomka. Tan waxay waydiisaa Suaalo badan taas oo naga cawinaysa ina raadino qoyskaaga. Waxa u bahanay warbixin badan sida ugu macquulsan. Waxad soo kaxayn kartaa qof wayn oo ka tirsan qoyska, ama Asxaabta ama saaxiib si uu kaga cawiyo balanta. Sidoo kale waxan isku dayayna inaa bixino turjumaan.
Markaa noo sheegtid meesha u malaynayso xubnaha ka tirsan qoyskaaga inay joogaan, waxan la xiriri doona asxaabteena joogta wadankaas waxana waydiinayna in ay naga cawiyaan Raadinta.
Ma balan qadayno guul, lakiin waan kula soo xirirayna sida ugu dhaqsaha badan oo aan helno wax war ah.
Hadii aad raadinayso qooys joogo yurub?
Waxad ka raadin karta qoysyada lumay - una ogolow dadka inay ogaadan inaad raadinayso ayaga - onlaynka. Booqo websayatka Trace the Face meesha aad ka fiirinkarto hadii qoayskaaga adiga ku raadinayaan. Sidoo kale waxad soo saari kartaa sawirkaaga si qoyskaga kuu la soo xiriraan.
HEL QOYSKAYGA KU LUMAY YURUB
Suaalo ku saabsan helida qoyskaaga lumay?
Soo dagso warqada fakti shiit si u hesho warbixin badan.
Daawo fiidyowgan hoose.
Fiiri sida hayadaha kale u awoodi karayan in ku cawiyaan.
Somali (pdf / 51.87 KB)